Njalo fan motor yamahhashi ingqondo kuyinto uhlu lwakho lomhlaba pilot. Omunye wabo ngempela unelungelo ngokuthi "ephephile, onekhono futhi umshayeli onekhono kakhulu; unsinkable ". Bryus Maklaren (Bruce McLaren) wahola uhlu siyefana. Ngakho-ke, ukushaqeka, ngaphezu usizi, ngemva kokufa kwakhe okungazelelwe at eGoodwood ngenkathi ukuhlola imoto entsha ngoba McLaren Can-Am, kwakunamandla ngokukhethekile. Ikakhulukazi indida nesihluku kwaba iqiniso lokuthi yena ngamabomu wakhetha ukungahlanganyeli ekugubheni izinhlanga ezimbili McLaren e Indianapolis futhi baphindela eNgilandi ukuba bathathe, njengenjwayelo, ogqoka ezikanokusho ukulungele test Can-Am izimoto.
Umshayeli, owayeneminyaka 33 kuphela, bejabule, ukubukeka salo singaphelelwa isikhathi obusha, kulula ukukhohlwa ukuthi, kubo bonke abashayeli lomhlaba, wayengumuntu, ngaphandle komngane wakhe Jack Brabham, elitheni konke, ngokuya isikhathi kule midlalo.
Maklaren Bryus: Biography racer
Wazalelwa 30/08/37 e Auckland, New Zealand, e umndeni Lesa noRuthe McLaren. Lapho ngineminyaka engu-16 wayesefile kakade lo umnikazi welayisensi, ukubamba iqhaza lakhe uhlanga lokuqala entabeni Austin 7. Uyise, unjiniyela kanye isithuthuthu racer, wamkhuthaza futhi kwaba umsekeli wakhe enkulu.
Bruce Leslie McLaren, ikakhulukazi nalapho ekhathele, wayexhuga kubonakale. Lokhu kwaba ngenxa sifo, esaziwa ngokuthi Legg-Perthes isifo, okuyinto ushaya ngokuzumayo umfana ngaphambili impilo eziyisishiyagalolunye kanye inamathela ukuba embhedeni emnyangweni wamathambo esibhedlela iminyaka emibili. Ngemva ukubuyiselwa ngokuhlanganyela hip ayisebenzi njengakuqala futhi ngezinye izikhathi iba buhlungu kancane.
Uma ebheka emuva, kuyacaca ukuthi okukhethekile ezihlekisayo Bruce ukumelana, isineke ukwelelesa okwaqala ngayo, noma okungenani, acacisa ngalesi sikhathi enwetshiwe.
Elinye icala kuwufanele ukukhumbula ngaye. njalo Bruce wayengumholi wempi onokuthula ayezidinga lapho esibhedlela kwaholela ontanga yabo, zivalwe ku izihlalo zabakhubazekile edonsa ngawo wonke amasondo, ngemfihlo forays ebusuku phansi emazombezombe, abushelelezi, izindlela ezitshekile. Steering was impela dabukisa Yiqiniso, lapho ayewusongo eziningi emibhedeni. Ingxenye ebalulekile yokuphikelela le ndaba wukuthi wonke amalungu ethimba kanye nomholi walo wabuyela emibhedeni yabo kungukuthi zibanjwe futhi alimale.
Lokubaluleke kakhulu abazali bakhe e ngokuphila kwakhe esemncane. Ukusekela kwabo nokunakekela kwabazali ngokucacile basiza ekuhlakuleleni omdala Bruce ukwamukelwa ngenjabulo ups yokuphila nezinkinga, ububele bakhe, umusa, isithakazelo kwabanye abantu nokuzimisela kwakhe amakhulukazi aphumelele.
Kuyafaneleka ukwengeza injongo yayo ufuzo sazuza izici. Bruce kwaba umamukeli lokuqala scholarship we-Association of New Zealand International Grand Prix "racer e-Europe." Lokhu kwenza ukuba umshayeli ezincane ukuba zize Old World, kodwa ekufikeni kwakucishe ngokwalo. Bryus Maklaren oneminyaka engu-20 ubudala nomngani wakhe Colin Beanland njengoba Mechanics thatha emhlabathini IsiZulu ngo-1958. Dzhek Brebhem, uJohn no-Charles Cooper esikhundleni njengoba kudingekile kuye ke uyise, ezimbili Zealand okusha wathuthela esitolo sabo ngokoqobo akha ngokwakho racing izimoto yakho "Umthetho ofingqiwe 2" Cooper.
Akuzange kwaphela isikhathi eside ngaphambi Bryus Maklaren racer "Umthetho ofingqiwe 2", lokwentiwako zabo eziphumelelayo zokuqhuba ibhizinisi nokuphoqa abathanda ukubheka ohlelweni yamahhashi ukuthola ukuthi ngubani lo omele amancane abasha kakhulu e-Commonwealth. Kodwa zonke abamangala ngayo mncintiswano ngo-1958 ngesikhathi Grand Prix of Germany, ekuhlanganiseni izinhlanga F1 futhi F2 ngesikhathi Nurburgring. Siphetfo lesisiqephu kuhamba phambili Dzhek Brebhem ubeke amazwana: "Angimazi. Arabhu eziningana wafika izipanela emithathu isondo eliyisipele kuphela ugcwalise uhlu ababambiqhaza, futhi ke lwaphumelela emncintiswaneni Day. "
Sekukonke, Bruce weza yesihlanu futhi ngowokuqala phakathi emotweni F2, emi endaweni yesikhulumi noTony Brooks, ngubani ngosuku olufanayo lwaphumelela emncintiswaneni, "Formula 1" ku "Vanwall." Yingaleso sikhathi lapho eqala yakhe yangempela yamahhashi umsebenzi Bryus Maklaren.
Biography racer sashintsha ngokuphelele lapho kuvela ethimbeni elilodwa ngo-1958, "Tyrrell", okuyinto zihlukaniswa ikhono ukhethe pilot abanamakhono, Bruce ahlinzekwa ukuze ushayele emgwaqweni F2 yakhe Cooper, futhi lo mngane futhi nakho zemfundo kudlale indima enkulu. Isimo Sokulindela Ukuphelela McLaren okwaqala ukuzibonakalisa ngezindlela eziningi. Ngasekupheleni Mike noddy Groman futhi Barney bengabahlobo kanye Mechanics scrupulous Cooper. Sehora ngaphambi kokuqala Bruce ababeza kuye bephethwe uhlu kancane ngesandla sakhe, wathi: "? Noddy noMike, senigcwalise ke ngamafutha kuze kube phezulu" The Mechanics akazange ngisho deign ukuphendula, bayiphonsa ukubukeka engumbulali. Uma bengakuqondi ngisho ambheke ke McLaren ayikwazanga ukuvula cap yamathebhu ukubheka ngaphakathi.
Inguquko kuya "Cooper"
Ngonyaka olandelayo, lapho, kanye Jack Brabham futhi Mastenom Gregory bajoyine "Cooper" ithimba. Bambalwa abantu bazi ukuthi Bryus Maklaren wafunda College of Engineering futhi eminyakeni elandelayo wayengeyena abanye abashayeli ababili abaphikisanayo isikhathi esithe xaxa iqhaza ukuhlolwa, ukuthuthukiswa kanye nokulungisa imoto, okuyinto yena Brabham. Lokhu kwaba inkathi emsebenzini obaluleke kunayo yonke futhi ujabule kanzima.
Kwakubuye kube yisibonakaliso Lapho abaholi in the mdlalo waqala ukubona ukuthi nakuba kwakubalulekile ukuba esiphezulu amandla injini, aziphonse izikhathi zingancishiswa nokusetha chassis. Ken Tyrrell iyiphayona lapha, futhi ngaso sonke isikhathi ibe umbono eliphezulu Bruce kule ndaba. Njengoba sekuchaziwe ke Tyrrell, enye yezinto ezinzima kakhulu une ukuqinisekisa uma ukuhlola umshayeli ukushayela ngesivinini njalo, ithanga ngemva ethangeni, bese ukwazi ukukhuluma mayelana ukuziphatha imoto nokunye. D. Kulapha kubeka isisekelo ukwakheka alandelayo lonke Ngini .
Ekupheleni kuka-1959, Bryus Maklaren at 22, baba umshayeli omncane engenathi wake ukunqoba umjaho we ubuqhawe zomhlaba, "Formula 1" - US Grand Prix ngesikhathi "Sebring". Ngoba "Cooper" 1959 th wayengowokuqala iminyaka emibili elandelanayo igolide, njengoba iqembu won abakhiqizi ubuqhawe, futhi ngo-1960, Jack agcinwayo isihloko iqhawe emhlabeni, futhi Bruce oneminyaka engu-23 ubudala weza endaweni yesibili kuleli thebula wentsha ye-pilot. McLaren unqobile ingqikithi ezine Grand Prix: USA (1959), i-Argentina (1960), Monte Carlo (1962) kanye Belgium (1968). Inkomba nakho yayo nokuzinza eminyakeni wukuthi simo kusitoreji zonke Championships eqeda endaweni yesihlanu ngemuva Graham Hill, Fangio, Jim Clark nomngane wakhe Brabham.
Wahlala ithimba, "Cooper" kuze 1966, bephumelela Bredhema inombolo esihlalweni somshayeli 1 lapho uJack wamyeka ngo-1962 ukwakha siqu izimoto zabo ezemidlalo. Ngalesi sikhathi, McLaren waqala ukwanda nenkani enemisebenzi zonke amagatsha motor ezemidlalo, kuhlanganise izimoto ezemidlalo. Wajabulela futhi ngathola abangane abaningi e-United States. Ngo-1966, yena lwaphumelela emncintiswaneni angu-24 eMhlanganweni Le Mans nge Chris-Amoni ngesikhathi 7-litre "Ford Mark IIA» futhi ngonyaka owalandela kwi Sebring yamahora angu-12 nge-Mario Andretti ngesikhathi "Ford Mark IV».
Enye ingqopha-mlando ebalulekile yafinyelelwa ku 1963-64 sika, ngoba efuna ukuhlala ngokwahlukana futhi kufanele ithimba yabo. Ngoba "Umthetho ofingqiwe" Tasman, ayenakho ezimbili sakhe injongo-eyakhelwe 2.5-litre Cooper. Ngasekupheleni Timmy Mayer uchithe isizini yakhe zokuqala zaseYurophu Formula 3, ekhulumela nursery ka Ken Tyrrell futhi Bruce kuthiwa kakhulu umxhwele esikusize ngendlela ithalente lakhe futhi umeme umshayeli abasha ukuba bahlanganyele naye ohlangothini uhlangothi lwembulunga. Lokhu kwakungeke nje kube uhlobo ukubuyekeza, njengoba Dzhon Kuper umxhwele ngokwanele ukuba asayine isivumelwano ne-American abasha kuleli ngesizini ezayo njengoba co-pilot futhi McLaren kwasekuqaleni. Nakuba Bruce futhi ngek ubuqhawe, iqembu omusha nilila ngenxa ngokufa okudabukisayo Timmy ngesikhathi umkhuba phambi uhlanga yokugcina ochungechungeni. Nokho, Teddy Mayer, oshonile mzalwane umphathi futhi umakhenikha Taylera Aleksandra, kwaba ukuqala a eside eyalandela ukubambisana, ekugcineni, ukudalwa McLaren Racing Ltd. ngo-1966 nge Teddy Mayer njengendlela umlingani. Kusukela kulo mzuzwana, McLaren wabonisa enye imfanelo. Waba usomabhizinisi ubuhlakani umholi abazikhandlayo.
Bryus Maklaren kuseyiyona nto lomhlaba, kodwa bayanda ukuvuthwa kwakhe kwamenza ukhululekile iqiniso lokuthi abanye babe ngokushesha kunokuba kuye, nokuthi ikusasa lakhe itholakala Idizayini, ukwakhiwa kanye nentuthuko. Khona-ke ezakhiwa izimoto ka-Formula 1, McLaren futhi Bruce iwine ngo-1968 eBelgian Spa ku ayo McLaren-Ford, futhi kamuva ngawo lowo nyaka, umshayeli iqembu lakhe Denni Halm iwine Grand Prix of Italy nase-Canada.
Sonke lesi sikhathi, kwahlelwa ezingqondweni Bruce futhi Teddy Mayer, ababezoba kuholele phezulu umsebenzi wakhe - Canadian-American Cup kweqembu ezemidlalo imoto 7. Inkampani McLaren Racing Ltd. uyakuthola ukusekelwa abaxhasi Chevrolet, Goodyear, Reynolds kanye Gulf futhi idale imoto ukuthi iwine ezinhlanu izinhlanga eziyisithupha ochungechungeni ngo-1967, ezine kuzo eziyisithupha ngo-1968, futhi bonke 11 ngo-1969. Lokhu ukubusa aphakeme ochungechungeni akuniké imiklomelo eminingi, futhi Leslie Bruce McLaren, ogama Umlando womuntu ophilako ngokuphazima kweso futhi kabuhlungu ophazamisekile, lezi ezifezwayo kwaba ukuthola Seagrave Trophy Royal Automobile Club. Kodwa kwakungenjalo kwenzeke.
Bryus Maklaren, ogama ukufa kwenzeke 2 Juni 1970 ngendlela eqondile ithrekhi Lavant "eGoodwood" Ngaphambi nje ithuba Vudkouta, wahlola M8D entsha, lapho wahlukanisa ezingemuva imoto ngejubane. Ukulahlekelwa downforce sokunciphisa umoya lapho zindiza destabilized imoto ukuthi waqala spin, yahamba ithrekhi kanye lase lishayisa unqenqema.
Bruce washada Patty Brikett emva kweminyaka engamakhulu amane bahlangana emcimbini e Timaru, lapho ahambele lapho kuhlala khona nokuncintisana. Novemba 20, 1965 babenesifiso indodakazi wazalelwa u-Amanda.
igama Auckland McClaren okuthiwa isikole, ipaki, ipaki zezimboni, emgwaqweni futhi ikamelo esikoleni lapho afundela.
Ngo-1990, Bruce owayebuthelwa Ehholo Lodumo eNew Zealand, ngo-1991 - ku Ehholo Lodumo ka Ngini ngamazwe, futhi ngo-1995, Ehholo Lodumo of America Ngini.
McLaren iwine Grand yakhe yokuqala Prix e-United States ngo-Sebring ngo-1959
Kwaphuma winner emncintiswaneni "24 Amahora Le Mans" ngo-1966
Wafika kuqala umncintiswano yamahora angu-12 ku-Sebring ngo-1967
Bruce baba iqhawe Can-Am 1967 futhi 1969.
Warts e Ukukhulelwa: izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Ihhotela Neptune Mare 4 * (Gennadi, Greece) izithombe, izibuyekezo